Ukuphathwa Lungisa - ngesisekelo impilo zezimali kwanoma iyiphi ibhizinisi.
Ngomqondo obanzi, ukulawula imisebenzi kukhona isethi yezenzo - iyunifomu ngezizathu eziningana - okuyinto baqondiswa ekufezeni injongo ethile futhi kuncike yokuphatha ezivame ukulawula tseli.Funktsii - uhlobo oluthile lomsebenzi, okuyinto ngokwebala lunye lwabaphathi zabasebenzi.
Ngo ukulawula theory , abalobi abaningi avelele: ukuphathwa jikelele, kanye ongaphansi imisebenzi ekhethekile upravleniya.Osnovnye ukuphathwa kwabo - kukhona imisebenzi ukuthi kungukuthi ezihlobene izici ezithile into ephethwe. Ukuze zonke izifundo ukulawula obschimi.Kak zingabantu ngokujwayelekile wabelane (main) ukulawula misebenzi ifaka: - ukuhlela; - ugqozi. - Inhlangano kanye nokudidiyela; - zokulawula kanye kontrolya.Obschie zokuphatha imisebenzi okumelwe yenziwe ngamunye iyunithi, nganoma isiphi zokuphatha ezingeni.
Isici esiyinhloko imisebenzi esemqoka ukulawula imisebenzi engaphezulu vzaimoproniknovenie.Rassmotrim podrobno.Planirovanie kuyinto ukuthuthukiswa izindawo umgomo-ukubeka nezinhlelo ukuyifinyelela ngayo. Ukuhlela umsebenzi - okuholela umjikelezo control, kusukela ekukhishweni neminye imisebenzi kungaphansi izinhloso jikelele ekufezeni tseli.Motivatsiya yinqubo inkanuko kumuntu othile noma iqembu labantu ukusebenza, enqophe imigomo yenhlangano inikeza organizatsii.Funktsiya sifinyelele izinhloso, okusho Kuyinto inqubo kumiswa isakhiwo inkampani, okwenza kube nokwenzeka ngabantu nge rabotat.Pod control ngempumelelo kusho imisebenzi inkomba isimo into nezinjongo ohlosiwe. Control akuyona isinyathelo eyodwa-off, kodwa inqubo eqhubekayo, okuyinto okufanayo ekuthuthukisweni yayo nge nokuhamba imijikelezo ukukhiqizwa, ngaphakathi okuyinto sidlula izigaba ezintathu: kwencazelo amazinga ukusebenza kwamabhizinisi, okuyinto kufanele ziqashwe; ukuhlaziywa kanye nesilinganiso empeleni izuzwe imiphumela target date; okwenza ushintsho olwaludingeka. ngeziphambeko Uvele kungabangela noma kokungenela ngokushesha imisebenzi inkampani, noma ukubukeza inguqulo izinhlelo, futhi kwezinye izimo - ukushintsha uhlelo kusukela esikhathini tseley.Iskhodya qapha, kukhona izinhlobo ezintathu: wokulungiselela, zamanje nezesikhathi sokugcina.
Regulation kuyinto umsebenzi okuyothi ngalo izici esekela lesi simiso ukuze indlela oyifunayo, futhi ukuze kuvinjelwe noma ukulungisa ukwehluleka ekuqhubeni ibhizinisi maqondana tseli.Konkretnye ukulawula umsebenzi indlela umsebenzi kuchazwe lingelakhe ukusebenza ukulawula nenhlangano iyonke noma izigaba ezithile kukhiqizwe sici protsessa.Iskhodya umthelela kumsebenzi ibhizinisi iyonke, othize (uchwepheshe nym) izici zihlanganisa: a ukuhlela abazoba kanye zamanje yezenhlalakahle nezomnotho; kwezomnotho ukuhlaziywa; ezimali kanye nokubika; standartizatsiya.Iskhodya isici nomthelela ekutheni umuntu ngamunye izigaba yokukhiqiza inqubo, ezifana imisebenzi yilezi: - Ukuphathwa of the lobuchwepheshe Amalungiselelo ukukhiqizwa inqubo, - eyisisekelo inhlangano ukukhiqizwa inqubo - isevisi inhlangano yokukhiqiza inqubo; - marketing.Iskhodya isici nomthelela ukukhiqizwa ethize okufanele izici ekhethekile zihlanganisa: ukuphathwa inkokhelo futhi inhlangano zabasebenzi ; ukuthuthukisa ukuphathwa kwabasebenzi; inhlangano yomsebenzi zezimali.
Ekugcineni, bonke imisebenzi ukuphathwa nomnqopho owodwa ezivamile - ukuphatha abasebenzi ngendlela ephumelelayo futhi ukhuthaze inqubo ukukhiqizwa, okungukuthi ngesisekelo impilo sezimali lyuboggo ibhizinisi.
Deus Ex - wedlula amaphuzu ayisihluthulelo
Indlela ukwandisa izindebe makeup?